Iisuite zeAdora-Ilha Grande 6 - I-Airbnb
Iisuite zeAdora-Ilha Grande 6
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJaqueline
UJaqueline ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Uya kuba nale flethi icwengileyo ngokupheleleyo enekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela, amanzi ashushu, iWi-Fi kunye nomabonakude. Yimizuzu eyi-10 kuphela yokuhamba ukuya elunxwemeni. I-Ilha Grande sisiqithi separadesi ekufuneka usindwendwele
Sakhe eli gumbi ukuze libonelele iindwendwe zakwa-Airbnb ezifuna ukuphonononga nokuhlala njengalapha ekhaya kunokuba ngumkhenkethi. Sixhobise ikhitshi yethu ngayo yonke into oyifunayo ukuze uzilungiselele ukutya kwaye uhambe ngesantya sakho.
Sithatha ngononophelo olukhethekileyo ukucoca igumbi kwindwendwe nganye. Sikwabonelela ngeetawuli kunye namashiti acocekileyo.
4.75 · Izimvo eziyi-123
Ilali yase-Abraao yeyona ndawo iphambili yokhenketho e-Ilha Grande. Kukho ukhenketho oluninzi lweenqanawa mihla le ukuya kundwendwela ezinye zeelwandle ezingama-106 kwiSiqithi. Kukho neetoni zeendawo zokutyela zasekhaya apho unokufumana ukutya okumangalisayo kunye neziselo kanye elunxwemeni. Ukuba unentliziyo ye-adventure kukho iindawo ezininzi onokuthi uhambe kuzo okanye ukhwele ibhayisekile, njengamachibi endalo, iingxangxasi, iincopho, iindawo zembali kunye nokunye.
Umbuki zindwendwe ngu- Jaqueline
Izimvo eziyi-1 385
Ndisebenze iminyaka emininzi njengomkhenkethisi esiqithini. Ndingavuya kakhulu ukukunceda ubhukishe uhambo kwaye ndinike iingcebiso malunga neendawo endizithandayo kwisiqithi.
Siza kuphendula imibuzo yakho kwaye sikunike iingcebiso malunga nokuba ungakonwabela njani ukuhlala kwakho eSiqithi. Unganditsalela umnxeba ku airbnb okanye ku whatsap.
Asihlali kwipropathi, kodwa sinezindlu ezi-6 ezirentisayo kwipropathi enye, ngoko ke niza kundibona ndingena ndiphuma.
Ukuba ufuna nantoni na phambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho, sihlala sikulungele ukukunceda.
Ndisebenze iminyaka emininzi njengomkhenkethisi esiqithini. Ndingavuya kakhulu ukukunceda ubhukishe uhambo kwaye ndinike iingcebiso malunga neendawo endizithandayo kwisiqithi…